संकल्प खबर तेस्रो वर्षमा - Sankalpa Khabar
संकल्प खबर तेस्रो वर्षमा
२१ कार्तिक ०७:०७
राष्ट्रिय अनलाइन पत्रिका संकल्प खबर आज कात्तिक २१ गतेदेखि दोस्रो वर्ष पुरा गरी तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको सन्देश पाठक समक्ष दिन पाउँदा हामी गौरवान्वित छौं ।
अखवारी पत्रकारितामा हाम्रो टिमको करिव अढाई दशकको अनुभव भए पनि अनलाईन पत्रकारितामा भने संकल्प खवर हाम्रो करिव करिव नयाँ यात्रा नै हो । नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक जनताले आफ्ना लागि आफैले बनाएको संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो भनेकै २०७४ साल मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचन हो । संविधान कार्यन्वयनको दिशामा हातेमालो गर्ने प्रयत्न स्वरुप २०७४ कात्तिक महिनाको आजैका दिन हामीले संकल्प खवर पाठक समक्ष ल्याएका हौं ।
२०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट संविधान घोषणा भएयता त्यसको कार्यान्वयनको बाटोमा मुलुक छ । राज्यका तीन वटै तहमा जननिर्वाचत सरकारहरु क्रियाशील छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन त अब निकट भविष्यमै हुन गइरहेको छ । अनलाइन पत्रकारिताको छोटो अनुभवका बीचमा हामीले हाम्रा पाठक समक्ष चुनावी सूचना र समाचार यथासंभव छिटो, विश्वसनीय र सजिलोसँग पु¥याउने प्रयत्न गरेका थियौं ।
हामीले सत्य–तथ्य, सन्तुलित र विश्वसनीय सूचनाको संप्रेषण जस्ता पत्रकारिताको आधारभूत आदर्श र मान्यतालाई हरसंभव पूरा गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ । दायित्व निर्वाहका क्रममा हामीले पत्रकारिताका आधारभूत मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई विशेष ध्यान दिँदै लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्श अनि प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सीमा र मान्यतालाई पनि उत्तिकै ध्यानमा राखेका छौँ । बोल्न, लेख्न, सुन्न र जान्न पाउने लगायत संविधानले ग्यारेन्टी गरेका नागरिकको मौलिक हक प्राप्तिको पक्षमा हामी निरन्तर पत्रकारिता मार्फत लागिरहनेछौं ।
संकल्प खबर मार्फत हामी निष्पक्ष र तटस्थ पत्रकारिताको अभ्यास गरिरहेका छौं । हामी निरपेक्ष रूपमा निष्पक्षताको नारा दिएर कसैको पक्षमा लेख्ने काम गर्नेछैनौँ । हामी मुलुकले अँगालेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मुलुकले अंगीकार गरेका र संविधान, कानुन र ऐनहरूले निर्दिष्ट गरेका विभिन्न मूल्य मान्यताका पक्षपाती हौँ। अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र राज्यको मूलधारबाट बाहिर रहेका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको संविधान प्रदत्त हकको सुनिश्चितताका लागि हामी निरन्तर क्रियाशील रहन्छौं । तर हामी कुनै व्यक्तिविशेष, वादविशेष, जात, समुदाय, संप्रदायविशेषका पक्षपाती कहिल्यै होइनौँ र हुन सक्दैनौँ ।
यतिबेला विश्व जगत नै कोरोनारुपी ठूलो महामारीको चपेटामा छ । संसरका अति विकसित मुलुकहरुले समेत कोरोना कहरसँग जुध्न सकिरहेका छैनन् । नेपाल जस्तो गरिव देशले सक्ने कुरै भएन । यतिबेला नेपाली जनता इतिहासमै सबै भन्दा भयभित तथा पीडित छन् । मिडियाप्रति धेरै नै आशावादी छन् । यस्तो अवस्थामा जनतालाई क्षण–क्षणमा समाचारको प्यास वढ्नु स्वभाविकै हो । यसका लागि सबै भन्दा सजिलो, छिटो र भरपर्दो माध्यम भनेकै अनलाईन मिडियाहरु हुन् । यस अर्थमा पनि हाम्रो दायित्व यतिबेला बढेको छ । संकटका बेलामा गलत सूचना दिएर धमिलो पानीमा माछामार्ने तत्वहरु हाबी हुन्छन् । यसलाई चिर्न पनि छिटो, छरितो समाचार प्रवाह गर्ने जिम्मेवार मिडियाको आवश्यकता पर्छ । त्यो आवश्यकता पूर्ती गर्ने जमर्को हामीले गरिहेका छौं ।
नेपालमा अखवारी पत्रकारिताको इतहास करिव डेढ सय वर्ष पुरानो हो , अनलाईन पत्रकारिता नितान्त नयाँ विधा हो । तर यो नयाँ विधामा नेपालले धेरै छिटो फड्को मा¥यो । उदाहरणका रुपमा विश्वमा छापा मिडिया सुरु भएको करिव ३ सय वर्ष पछि मात्रै नेपालमा छापा मिडिया सुरु भयो , तर विश्वमा अनलाईन मिडिया सुरु भएको १० वर्ष पुग्दा नपुग्दै नेपालमा पनि अनलाईन मिडिया सुरु भयो । मिडियाका लागि प्रजातन्त्र कति महत्वपूर्ण हुँदो रहेछ ? भन्ने बुझ्न यो उदाहरण नै काफी छ ।
प्रजातन्त्र विना प्रेस स्वतन्त्रता टिक्दैन , प्रेस स्वतन्त्रता विना प्रजातन्त्र टिक्दैन । प्रजातन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रता एक अर्काका परिपुरक हुन् । नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत इन्टरनेटको प्रयोग गरेर गरिने विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासमेत पर्दछ । त्यसैगरी संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हकअन्तर्गत विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी अधिकारहरूको प्रत्यायोजनमा नै प्रेस स्वतन्त्रता निहीत छ । यस अर्थमा अनलाइन वा अन्य प्रकारका पत्रकारितामा कानुनन् कुनै विभेद गरेको छैन ।
सन् १४५६ मा प्रिन्टिङ प्रेसको आविष्कार भएपछि निर्विकल्प रुपमा शुरु भएको अखवारी पत्रकारिता वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा धुरमुरमा छ । प्राय : सबै अखवारहरु अनलाइन संस्करणमा गइसकेका छन् । सूचना प्रविधिलाई आत्मसात् नगरी अखवारी पत्रकारिता पूर्ण बन्ने अवस्था अब रहेन । तर अनलाईन मिडिया आँफैमा पूर्ण छ ।
छापापत्रकारिता रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन पत्रकारिता ह’ दै इन्टरनेटको युगसम्म विश्व जगत आइपुगेको छ । सूचना प्रविधिमा आएको पछिल्लो विकास क्रमले इन्टरनेटमा श्रव्य, दृश्य, तस्वीर र अक्षरका माध्यमबाट समाचार वा कुनै पनि सूचना एक स्थानबाट राखेपछि संसारभर क्षणभरमा हेर्न सकिने भएकाले यस प्रविधितर्फ पाठकको आकर्षण बढ्दो छ । विश्वको जुनसुकै स्थानमा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने पत्रपत्रिका तथा रेडियो टेलिभिजन पढ्न सुन्न र हेर्न सकिने प्रविधिको विकास इन्टरनेट प्रविधिले सहजता बनाएको छ ।
अनलाइन वा इन्टरनेट सञ्चार भन्नाले कम्प्युटर र फोनको माध्यमद्वारा गरिने सन्देश सम्प्रेषण भन्ने बुझ्नुपर्छ । विश्वको पहिलो अत्याधुनिक अनलाइन पत्रिकाको रूपमा अमेरिकाको शिकागो ट्रिव्युनलाई लिइन्छ । यो सन् १९९२ मा इन्टरनेटमा प्रकाशित भएको थियो । यसपछि नै आधुनिक अनलाइन पत्रकारिताको शुरुवात भएको मानिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा मर्कनटाइल कम्युनिकेसनले २०५१ सालदेखि व्यावसायिक इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न थालेको हो । नेपालमा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध भएको झण्डै एक दशकअघि मात्र भए तापनि अनलाइनको शुरुवात भने देश बाहिर रहेका नेपालीहरूले त्यसअघि नै गरिसकेको भेटिन्छ । अहिलेसम्म सन् १९९२ मा अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपालीले सञ्चालनमा ल्याएको द नेपाल डाइजेस्टलाई पहिलो नेपाली अनलाइन मानिंदै आएको छ ।
हाम्रो सन्दर्भमा अनलाइन पत्रकारिताको जति महत्व छ जटिलता पनि त्यतिकै छ । नेपाल जस्तो अशिक्षित र भौगोलिक विकटताका कारण इन्टरनेटको विस्तार तथा वितरणमा कठिनाइ भने अवश्य नै रहेको छ । अरु मिडियाका तुलनामा अनलाइन मिडिया कम लागतले पनि संचालन हुन सक्ने अवस्था छ । पत्रकारिता नबुझेका र गलत उद्देस्य बोकेकाहरुले दुरुपयोग गर्ने संभावना बढी छ । हाम्रै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि कतिपय अनलाइलनमा स्रोत नखुलाई हतारमा सम्प्रेषण गरिएका सामग्रीहरू हुन्छन्, जसले गर्दा आमसञ्चार क्षेत्र उपर सर्वसाधारण जनतामा रहेको विश्वासका साथै नैतिकतामा समेत प्रश्न चिन्ह लाग्न सक्ने स्थिति रहन्छ । यो मामिलामा संकल्प खवर धेरै सतर्क छ ।
छापा मिडियामा समाचार सामग्री उत्पादन गरेर मात्र पुग्दैन । वितरणका लागि छुट्टै नेटवर्क पनि जरुरी हुन्छ । सिद्धान्ततः अनलाइन मिडियामा एकपटक अनलाइनमा राखिसकेपछि विश्वको जुनसुकै कुनाबाट त्यसलाई हेर्न सकिने हुनाले वितरणको समस्या हुँदैन । तर अरु मिडियाको तुलनामा अनलाईन अखवारका विकल्पहरु धेरै हुन्छन् । उदाहरणका लागि मानिसले एउटै कोठाभित्र बसेर विश्वका जुनसुकै अनलाइनमा पढ्न र सुन्न र हेर्न सक्छ , तर अरु मिडियामा यस्तो पहुँच हुँदैन । त्यसैले अनलाईनको मुख्य चुनौती भनेकै पाठकको आँखामा पुग्नु र उसको विश्वास जित्नु हो ।
दुई वर्षको यस अवधिमा हामीलाई माया गर्ने पाठक, लेखक, कलाकार, साहित्यकार, उद्योगी व्यापारी, विभिन्न क्षेत्रका पेसाकर्मी, व्यवसायी, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरूप्रति कृतज्ञ छौँ । आगामी दिनमा हाम्रा सामग्रीलाई अझ परिस्कृत गर्ने मात्र होइन, डिजिटल प्रविधिको विकासले दिएका संभावनाको खोजी गर्दै अझै सरल रुपमा सूचना सम्प्रेषण गर्ने जमर्कोमा लागिरहनेछौं ।
नेकपा सचिवालय बैठकमा विष्णु पौडेलको बर्थ डे सेलेब्रेसन
१६ मंसिर १४:२७
सबै सुविधा र अवसरमा फरक क्षमता भएकाहरुको समान पहुँच…
१८ मंसिर ०७:१७
कांग्रेस नेता पौडेलले आज भव्य रूपमा तनहुँको बुल्दी पुल…
१८ मंसिर ०८:५५
उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचन आज, कसको पल्लाभारी ?
१३ मंसिर ०९:१४
१८ मंसिर ०६:४७
ओलीको कार्यशैली मुलुकका लागि गलपासो
१४ मंसिर १७:३४